crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> La-yaabka | HimiloNetwork
Himilo July 4, 2022	Leave a comment 6 Views
MUQDISHO (HN) — 10 bilood kahor ayaa iPhone-kii uu sitay kaga dhacay webi ku yaalla dalka England waxaase yaab ku noqotay inuu usoo celiyay isaga oo weliba shaqaynaya qof kale oo soo helay. Bilowgii bishan, Miguel Pacheco wuxuu qoyskiisa kula mushaaxayay webiga Wye ee Cinderford, Gloucestershire, markii uu indhaha ku dhiftay wax buluug u eg oo biyaha ku dhex jira. ...
MUQDISHO (HN) — Bal qiyaas adiga oo kusoo kacay iyada oo wejigaada lala xiriirinayo ama loo yaqaan ‘ninka ugu xun oo aad ku aragto qadka internet-ka’. Way kugu adag tahay sax! Laakiin nin u dhashay dalka Spain waa xaqiiqo uu ku waabariistay. Josep Maria García, waa 42 jir ku nool Catalonia dalka Spain. War kama uusan heyn sida wax u ...
Himilo June 19, 2022	Leave a comment 65 Views
MUQDISHO (HN) — Nin ku nool magaalada Shanghai, dalka Shiinaha ayaa dhawaan qabsaday hadalheynta kaddib markii uu jaceylkiisii hore oo xiriirka u jartay uu weydiistay inay cawilceliso ama magdhow ka siiso lacagtii uu ku qarash gareeyey intii ay wada socdeen. Liis gaaray saddex bog oo ay ku qoran yihiin qaan wixii uu ku lahaa maalmihii ay wada socdeen sida lacagihii ...
Himilo June 16, 2022	Leave a comment 51 Views
MUQDISHO (HN) — Nin Koofur Afrikan ah ayaa muuqaal saameyn ka dhaliyay baraha bulshada ka dhex abuuray goob tacsi ka jirtay kaddib markii uu xiriir guur ugu soo bandhigtay aabaha dhintay gabadhiisa. Markii ay timaado isku soo bandhigashada xiriirka guurka, goob iyo goor ku habboon waxaa waxa laga fikiro. Mana ku jirto intaas meel tacsi taalo. Laakiin taasi kama horjoogsan ...
Himilo June 15, 2022	Leave a comment 42 Views
MUQDISHO (HN) — Gabadha aad u jeedaan waxaa afduubay kadibna shaabadda dhabankeeda ku qoran ku sameeyey nin ay isjeclaan jireen balse ay kala tageen. Falkanina wuxuu ugu sameeyey aargudasho ah sababtii ay xiriirka u nacday. Tayane Caldas, waa 18 jir ku nool dalka Brazil – iyada oo u socta iskuulkeeda waxaa jidka ka helay saaxiibkeedii hore Gabriel Coelho, kaas oo si ...
Ninka ku xaragooda dahab gaaraya 15 kilogaram +Sawiro.
Himilo June 15, 2022	Leave a comment 29 Views
MUQDISHO (HN) — Maalin walba dahab culeyskiisu gaarayo shan iyo toban kiilo isaga oo xaragoonaya ayuu dhex maraa magaalada Ho Chi Minh City. Waana ganacsade leh xarun cunnooyin fudud iibisa. Đỗ Ngọc Thuận, oo 34 jir wuxuu inta uu xusuusan yahayba jeclaa ku xaragoodka dahabka. Markii uu gaaray awooddii uu ku iibsan lahaana kama labalabeynin. Waxaase cajiib leh inuu durba ...
Dadka sugayay deeq raashiin ah oo la siiyay Macmacaan + Sawiro.
Himilo June 15, 2022	Leave a comment 32 Views
MUQDISHO (HN) –– Boqollaal qoysas ah iyo carruurtooda oo ku nool gobalka Tula ee dalka Ruushka ayaa gargaar ahaan u helay cunnooyin buskud-la-moodka ah ee lagu faakiheysto xilli ay filanayeen inay heli doonaan cunno ay karsadaan oo dalag iyo iidaan isugu jira. Bishii May saxaafadda Ruushka ayaa baahisay in dowladdu ay deeq cunno ah gaarsiisay dadka ku nool gobalka Tula ...
Haweeneyda Cidiyaheeda korinaysay muddo 30 sanno ah +Sawiro.
Himilo June 15, 2022	Leave a comment 33 Views
MUQDISHO (HN) — Cordelia “Dee Dee” Adams, oo ah gabar ku gaarowday qurxinta ciddiyaha faraha ayaa muddo 30 sannadood ah waxay ka caaganeyd inay jarto faraheeda oo hadda dherer ahaan gaaraya in ka badan 12 inches. Waana 59 jir ku nool Indiana, dalka Maraykanka. Sannadkii 1989 kii ayay bilowday inay dayso cidiyaheeda. Waxayna soo jiidatay indhaha dadka waana mid ay ...
Himilo June 15, 2022	Leave a comment 11 Views
MUQDISHO (HN) — 24 jir u dhashay dalka Shiinaha ayaa lagu riday xukun ah inuu bixiyo lacag dhan $150,000 si loogu dayactiro waxyeelooyin uu u geystay gawaari nuuca raaxada ah xilli uu cabsanaa. Muuqaallada CCTV ayaa muujiyay ninkan oo kasoo baxaya baar qamriga lagu iibiyo kadibna laad iyo gacanba isugu daraya gawaari ku baakiman baarka hortiisa kuwaas oo ahaa kuwa ...
Orgi lagu riday xukun saddex sano oo xabsi kadib markii uu dilay islaan waayeel ah!
Himilo June 1, 2022	Leave a comment 33 Views
MUQDISHO (HN) — Maamulka degmo ku taalla dalka Sudan ayaa saddex sannadood oo xabsi ah ku riday Orgi kaddib markii uu herdiyay haweeney waayeelka kadibna ay u dhimatay. Marka loo eego warfidiyeenka gudaha, Orgigan ayaa si xun u herdiyay islaan waayeel ah oo ku nool tuulada Rumbek East County iyada oo ka jabtay riciraha dhaawac daranna uu gaarsiiyay. Macadda cidda soo ...